4 Siyaabaha Hel Free Ringtones u Android
Sidee loo helaa ringtones lacag la'aan ah Android
Waxaad ka heli kartaa ringtones lacag la'aan ah qalab mobile Android adigoo isticmaalaya Chine oo lacag la'aan ah, barnaamijyadooda gaare ringtone lacag la'aan ah, ama samaynta ringtones on Lugood iyo wareejiyo phone Android. Kuwani Chine oo lacag la'aan ah iyo barnaamijyadooda gaare ringtone lacag la'aan ah u ogolaadaan isticmaalayaasha inay soo dejisan iyo edit kun oo ringtones waxayna u isticmaalaan sida wicitaanka dhawaaqa soo socda, dhawaaqa digtoonaanta ama dhawaaqa SMS. Qalabka telefoonada gacanta Android taageeraan tiro balaadhan oo ah qaabab audio ka mid yihiin .wav, .3gp, .ogg, .mp4, .mp3, WMA, .aac iyo .amr FG. Hoos waxaan ku sharaxay hababka kala duwan oo aad u isticmaali karto si aad u hesho ringtones lacag la'aan ah qalab android aad.
Habka 1: Download ringtones free on kombiyuutarada iyo wareejiyo Android
Habka 2: Apps ringtone Rree
Habka 3: Apps gaare ringtone Bilaashka ah ee Android
Habka 4: Samee ringtones on Lugood iyo wareejiyo phone Android
Goobta inay halkan u isticmaalaan waa Myxer
Talaabada 1: Tag website Myxer iyo dhirta dhex qaybood in uu doorto ringtone ugu wanaagsan lacag la'aan ah si ay u soo bixi aallada Android aad
Talaabada 2: Waxaa sameyn kartaa saxiixin at this site haddii aad rabto in lagu badbaadiyo ama la wadaagto ringtones aad jeceshahay ama idaacadaha
Talaabada 3: Waxaad heli doontaa fursado badan oo ringtone sida Favorites Flo ee, Urban Casriga, hip hop Classic, Modern Hard Rock iyo ku haminayaa in u download. Riix si aad ringtone jeclaaday inuu ka bilaabaya geedi socodka ee download.
Talaabada 4: Marka marxaladdan, waxaad qabtaa laba fursadood oo aad ku ringtone this. Qofka ugu horeeya ee waa iyada oo downloader ah sida tababaraha internet download oo halkan aadan u baahan tahay inaad saxiixdo. Ka dib markii gujinaya aad ringtone la doonayo, aad downloader IDM qaado doonaa ringtone ka website fiicni oo aad ku dhaliyay in ay si toos ah u download it. Markaas ka your computer aad u gudbin doona si aad telefoon dhex card Bluetooth ama SD ama cable USB.
Talaabada 5: Habka labaad, waxaad u baahan tahay inaad saxiixdo. Ka dib markii ay kor u saxiixay, aad guji qaybta ringtone iyo ay kuu soo baxdo in ay doortaan aad ringtone la doonayo. Markaas riix si aad u hesho ringtone ah.
Talaabada 6: Ka dib markii gujinaya ah 'Hel waa badhan, fiicni ku weydiin doonaa inaad geli lambarka telefoonka aad markaas ku dhufo "Next.'
Tallaabo 7: markaa aad side dhibic ka hoos menu oo guji 'Next.'
Tallaabo 8: Riix dir 'button u soo dirto ringtone si aad Phone. Fariin qoraal ah waxaa loo diri doonaa qalab android aad la xiriir si aad u ringtone. Qoraalka oo HAA in ay aqbalaan ringtone ah
Waxaad ka heli kartaa ringtones lacag la'aan ah Android qalab mobile iyadoo la isticmaalayo Chine oo lacag la'aan ah. Kuwani Chine oo lacag la'aan ah u ogolaadaan isticmaalayaasha inay kala soo bixi kun oo ringtones qalabka ay android mobile. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda kuwanu waxay ka iman la fududahay in la isticmaalo interfaces, si aadan u baahan tahay in ay ka wel ku saabsan sida loo isticmaalo. Dhab ahaantii waxaan haysanaa boqolaal barnaamijyadooda ringtone lacag la'aan ah androids heli karaa internet-ka u free download. Waxaan doonayaa inaan ku qor kaliya ee ugu sareysa saddexda barnaamijyadooda ringtones lacag la'aan ah androids iyo siin URLs ay.
Ringtones Bilaashka ah ee Android
Ringtones Bilaashka ah ee app Android ogolaado in aad astaysto qalab mobile android aad ringtone jecel, wallpaper iyo dhawaaqa gaadhsiin. Tani waa app ugu fiican in ku siin karaa wax walba oo aad u baahan tahay qalab mobile Android. Waxaad sameyn kartaa in aad ringtone soo bixi sida aad SMS dhawaaqa, wac dhawaaqa socda ama dhawaaqa digtoonaanta. Features ee App waxaa ka mid ah:
Qorsheyso waqti ay ku ciyaari dhawaaq aad door bidayso
Isticmaal ringtone sidii aad xiriir ringtone, alarm sanqadha ama codka SMS
Calan button widget ee ka jeeclaadeen ringtone ama dhawaaq aad screen guriga phone android
Waxaad isticmaali kartaa ZEDGE ™ Ringtones & Wallpapers app si aad u hesho ringtones lacag la'aan ah qalab android aad. App waxa uu leeyahay kun oo ringtones lacag la'aan ah, wallpapers iyo ogeysiis u muuqataa in aad isticmaali karto si aad si fudud u astaysto qalab android aad. App waxa uu leeyahay muuqaalada badan oo ay ka mid yihiin kuwa soo socda:
Raadi la talooyin, wallpapers dejinta gudaha ka app
Calan u gaadhsiin codadka, alarm codadka iyo ringtones ka app gudahood
Waxay bixisaa doorasho koox ringtones jecel oo aan soo degsado
Android Popular Ringtone App ayaa kumanaan category ah ringtones ugu caansan. Tani app Android kuu ogolaanayaa inaad u astaysto qalab mobile android aad ringtone jecel, wallpaper iyo dhawaaqa gaadhsiin. Waxay leedahay top 30 qiimeeyo Gurtida caan ah oo eeg qabow inaad marwalba ku jeclaan doonaa. On top ka mid ah 30 qaybood sare, waxaa jira dad badan oo qaybaha ringtone kale uu ka soo xusho oo ay ku jiraan hip hop, garaaca technofest, technofest, remix, R & B, DJ, kooxda, caweyska, gitaar, piano oo dheeraad ah. Sifooyinka kale ee app waxaa ka mid ah:
Press iyo qaban badhamada goobta
Taariikhqorihii cod Handy
Waxaad ka heli kartaa ringtones free qalabka mobile aad android isticmaalka barnaamijyadooda gaare ringtone lacag la'aan ah. Kuwani Chine oo lacag la'aan ah lagaaga caawiyo in aad si loogu badalo aad heeso maktabadda guur galay 30 ringtones labaad iyo wareejiyo qalabka android aad. Qalabka telefoonada gacanta Android aqbali ringtones la kordhin file mp3. Waxaad ka heli doontaa in inta badan barnaamijyadooda gaare ringtone free mp3 badalo ringtones. Sidaas aadan u baahan tahay in ay ka wel ah ku soo celiyaa. Waxaa jira boqolaal barnaamijyadooda gaare ringtone lacag la'aan ah qalab android ee internet-ka.
Kan sameeyey Ringtone Mp3 Editor
Waxaad isticmaali kartaa Kan sameeyey Ringtone Mp3 Editor si ay u sameeyaan ringtones lacag la'aan ah telefoonka aad android. Waxaad qayb ka mid ah song jecel jaray kartaa maktabadda music android oo badalo galay ringtone ah, dhawaaqa digtoonaanta afuuftaan ama dhawaaqa SMS. Kan sameeyey Ringtone Mp3 Editor waa app oo lacag la'aan ah in aad isticmaali karto si fudud oo dhaqso uga dhigi mp3 adiga kuu gaar ah ringtones. Sifooyinka kale ee app waxaa ka mid ah:
Dooro file maqal ah ka aad telefoon ama ka cajalado.
Dooro soonaha cut aad audio ah
Calan ama badbaadin sida faylka sida oo aad ringtone, dhawaaqa digtoonaanta ama dhawaaqa SMS
Taageerada regelingen, AAC, MP3, qaabab music kale ugu Amr iyo
Kan sameeyey Ringtone
Kan sameeyey Ringtone waa app oo lacag la'aan ah oo kaa caawin kara in aad la abuuro codadka ee ringtone, digniinta, iyo farriimaha ka files audio. App Tani waxa ay taageertaa badan oo kala duwan oo ay ku jiraan qaabab audio AAC, MP4, MP3, regelingen, 3GPP iyo Amr. Si ka duwan barnaamijyadooda badan Android loo isticmaalayo furayaasha Menu in uu kaydiyo hawlaha software, inta badan gacanta ku of app this u nugul yihiin taabashada iyo baxay interface ka. Qaar ka mid ah astaamaha caadiga ah ee app waxaa ka mid ah
Nuqul, gooyaa oo xanjo.
Dheellitir mugga u mp3.
Libdhi gudaha / dibedda u mp3.
Ringdroid - Kan sameeyey Ringtone
Waxad abuuri kartaa kumanaan ringtones maktabadda phone android aad, ama u qoraan kuwa cusub ee la app this. Tani waa dhab editor asalka ringtone nidaamka hawlgalka Android, ay hore u samaysay 2008 oo lagala soo bixi by malaayiin dadka isticmaala oo dunida ah. App wuxuu kaa caawin karaa ka jira files audio abuuri karto ringtone u gaar ah oo iyagii wuxuu dhex qotomiyey sidii ringtone soo socda, dhawaaqa SMS ama dhawaaqa digtoonaanta.
Tallaabada 1 Samaynta ringtones on Lugood
Si fudud Waxaad samayn kartaa ringtones on Lugood iyo wareejiyo qalabka mobile android. Tusaale ahaan waxaad leedahay file maqal ah in aad computer iyo aad rabto in aad u isticmaasho sida dhawaaqa SMS, alarm dhawaaqa ama wac dhawaaqa soo socda. Waxaad si fudud u isticmaali kartaa Lugood si loogu badalo kuwa files audio muusikada iyo markaas iyaga wareejiyo telefoonka aad android.
Tani waxa aad u fudud. Codsiga Lugood ee your computer Launch. Dooro song aad ka jeeclaadeen ka computer ka iyo waxa ay soo dhoofsadaan codsiga Lugood in aad bilowday. Inkasta oo codsiga Lugood ah, xaq guji file maqal ah in aad laga keeno oo guji ikhtiyaarka 'Hel Info.' Haggaaji waqtiga stop iyo markii bilowgii aad ringtone ah. Codsiga Tani waxay u saamixi doontaa in aad kaliya in ay doortaan ringtones in ay yihiin 30 seconds dheer ama ka yar.
Kala qayb ka mid ah file maqal ah in aad soo xulay file asalka. Xaqa guji file mar kale iyo doorashada ikhtiyaarka Abuur version ACC. Tani bedeli doonaa file music asalka laba nuqul. Naqilkeedii ayaa gaaban waa ringtone. Delete version ACC in idinka abuuray Lugood. Delete faylka gaaban gabayga oo ka Lugood.
Tallaabada 2 gudbiyo phone android
Kala beddelashada ringtone in aad abuuray kor ku xusan inay telefoonka ah android waa mid aad u fudud. Si fudud click double on ringtone iyo doorto ikhtiyaarka 'waxa ay sii kordhineysaa in aad Lugood maktabadda' laga helo qaybta ringtones. Waxaad la sameeyo.
> Resource > Android > Sida lagu Helo Free Ringtones u Android